International Education Expo 2019 ပညာရေးပြပွဲကြီး | MyStyle Myanmar
International Education Expo 2019 ပညာရေးပြပွဲကြီး
“International Education Expo 2019” ပညာရေးပြပွဲကြီးမှာ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ပညာသင်ဆုပမာဏ ဘယ်လောက်အထိရနိုင်မလဲ?ဘယ်လိုလျှောက်ထားကြမလဲ?
မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSEဖြေဆိုထားသည့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ HND-ABE-NCC လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူများနှင့် ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများအပြင် နိုင်ငံတကာပညာရေးကို တစ်နေရာတည်းမှာ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာလိုသူများအတွက် CROWN Education မှ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် International Education Expo 2019 ပညာရေးပြပွဲကြီးအတွင်း ယူကေ၊ယူအက်စ်၊ ကနေဒါ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ နယ်သာလန် အစရှိသည့်နိုင်ငံ အသီးသီးမှတက္ကသိုလ်များ၏ အထူးပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
SUNY Oswegoမှ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် စာသင်နှစ်အလိုက်ပေးအပ်မည့် USD 6000မှ USD 9000 အထက် ၅ဝ%ပညာသင်ဆုများအပြင် STEM (Science, Technology, Engineering or Math) ဘာသာရပ် လျှောက်ထားလိုသူများအတွက်ပေးအပ်သွားမည့် ပညာသင်ဆုကြီးများ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်​ကြားလိုသည့် မြန်မာကျောင်းသား ​ကျောင်းသူများအတွက် –
University of Huddersfieldရှိ Business & Engineering Top Up and Master Degreeများကို လျှောက်ထားလိုသည့်ကျောင်းသားများအတွက် ၅ဝ%ပညာသင်ဆုများ
UWE Bristolမှ HND,ABE,NCCပြီးထားသည့် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ၅ဝ% Scholarship for Top-Up Programmeများအပြင် Master Degree Programများအတွက် ၅ဝ%ပညာသင်ဆုများ
Russell Group အဖွဲ့ဝင် University Sheffield, University of Leedsစသည့် Rankingမြင့်တက္ကသိုလ်ကြီး များမှ ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆုများ
Bellerbys Collegeရှိ A Levelကို တက်ရောက်ပြင်ဆင်လို သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် ၄ဝ%အထက် အထူးပညာသင်ဆုများ
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Edu Trustရရှိထားသည့်ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် Free Air-Ticketရရှိမည့်အပြင်-
James Cook University Singaporeရှိ ၁ဝဝ%, ၅ဝ%, ၂၅% အထူးပညာသင်ဆုများ
စင်္ကာပူထိပ်တန်းစီးပွားရေးသင်ကျောင်းဖြစ်သည့် SIMမှ ပေးအပ်မည့် ၁ဝဝ%အထူးပညာသင်ဆုများ
PSB Academy Singaporeမှ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည့် Study Grantများ
MDIS Singaporeမှ Bachelor Degree, Master Degreeများအတွက် ပေးအပ်မည့်Study Grantနှင့် အထူးအခွင့်အရေးများ
NIM Singaporeရှိ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း၇ဝနှင့်ညီမျှသည့် MBA ပညာသင်ဆုများနှင့် Study Grantများ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန် စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များ ကို ပညာသင်ဆုဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် –
Stamford University Thailand မှ ပေးအပ်သွားမည့် ၂၅%မှ ၅ဝ%ပညာသင်ဆုများ
Bangkok University Thailand မှ ပေးအပ်သွားမည့် ၁ဝဝ%,၅ဝ% ပညာသင်ဆုများအပြင် USA, Canada, UK, Singapore, Thailand,
Netharlands အစရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်​ပေါင်း(၁ဝဝ) ကျော်ရဲ့ပညာရေးသတင်းအချက်အလက် အစုံအလင်ကိုပါ လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာ ​ကျောင်းတက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်း​တွေလည်း သိရှိနိုင်အောင် mentionလေးခေါ်ပေးလိုက်ပါနော်….
“ International Education Expo 2019 ပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန်နှင့် အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်” ပညာရေးပြပွဲနှင့်​ဆွေးနွေးပွဲကို အခမဲ့တက်ရောက်ရန်၊ ​အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Form ဖြည့်ကာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ http://bit.ly/ieduexpo2019
ဝ၁-၅၂၇-၈၃၈၊ ဝ၉-၉၇၇-၉၇၇-၂ဝဝ၊ ဝ၉-၄၄၅၅ ၆၆ ၇ဝ၁~၂